gabdhaha kubadda cagta Afghanstan
Dadka shaqada laga joojiyay ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta, ku xigeenkiisa, xoghayaha guud ee xiriirka, madaxii goolhayayaasha qaranka iyo isku-duwaha ciyaaraha gobollada.
Go,aankan kasoo baxay xeer ilaaliyaha guud ayaa imanaya laba maalin kaddib marki uu madaxweynaha Afghanstan Ashraf Ghani uu amray, in baaritaan lagu sameeyo warbixintan fadeexada ku ah kubadda cagta dalkaasi oo markeedii hore uu soo daabacay wargeyska kasoo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian.
Ghani wuxuu warbixintan ku tilmaamay mid ka nixisay dhamaan dadka reer Afghanstan.
Warbixintan ayaa sheegeysa in falalka anshax xumada ah ee lagula kacay gabdhaha xulka kubadda cagta Afghanstan, ay ka dhaceen gudaha dalka Afghanstan gaar ahaan xarunta xiriirka kubadda cagta, iyo xarun ay ciyaartooyda gabdhaha tababarro ku qaadanayeen oo ku taalla dalka Urdun bishii Febraayo ee sannadkaan.
Xoghayaha guud ee Xiriirka Kubadda Cagta Sayed Alireza Aqazada, ayaa si xoog leh u beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay xiriirka kubadda cagta Afganstan.